एउटै बोटमा ४५० किलो सुन्तला - Gulminews
एउटै बोटमा ४५० किलो सुन्तला
२०७६ पुष २, १७:४६
पुस २, बागलुङ । यो त्यही सुन्तलाको बोट हो, जसलाई टोपबहादुर खड्काले ३९ वर्षअघि रोपेका थिए । चार दिन लगाएर गुल्मी, भाडगाउँबाट ल्याएको बोटमा योपालि ४५० किलो सुन्तला फल्यो । गाउँमा चलेको मूल्य अनुसार त्यही एउटै बोटले रू.२७ हजार कमाइ दियो ।
बजारसम्म आइपुग्दा सुन्तलाको मूल्य अझ बढ्छ । बगैंचाबाटै किन्दा भने प्रतिकिलो रू. ५० देखि ६० सम्म पर्छ । ‘तीन–चार रोपनीको अन्नबालीलाई एउटै बोटको सुन्तलाले जित्यो’, बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका खड्काले भन्नुभयो, ‘यो वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा बढीले सुन्तला उत्पादन बढेको अनुमान छ ।’
दुई वर्षअघि सोही बोटमा जम्मा ३०० किलो सुन्तला फलेको उनको भनाइ छ । ‘सुन्तला बाक्लो फल्यो, टेकै लगाएर अडाउनुप¥यो, केही बोटका त हाँगै भाँचिए’, खड्काले भने, ‘मौसम राम्रो प¥यो, पानी, मल व्यवस्थापन र रेखदेखमा पनि ध्यान दियौं ।’ खड्काले विसं २०३७ मा १०० बिरुवाबाट व्यावसायिक सुन्तलाखेती शुरु गरेका थिए । उनको बगानमा अहिले नयाँ पुराना गरी २०० सुन्तलाका बोट छन् । सबै बोटमा गरी यो वर्ष चार टन सुन्तला फलेको खड्काले बताए ।
उनका अनुसार सुन्तलाबाट वार्षिक रू.५ लाखसम्म कमाइ हुन्छ । खड्काले ‘सेलर स्टोर’ मा भण्डारण गरी पछिसम्म सुन्तला बेच्ने गरेका छन् । त्यही सुन्तला माघ, फागुनमा बेच्दा प्रतिकिलो रू. १०० सम्म पर्छ । ३९ वर्षअघि सुन्तलाखेती गर्ने गाउँकै एक्लो किसान थिए, खड्का । अन्नबाली छाडेर सुन्तला लगाउँदा कतिले त उनको खिस्सी पनि गरे । सुन्तलाले व्यावसायिक सफलता दिलाउला भनेर कमैले सोचेका थिए तर, अहिले खड्का एक्लो छैनन् । गाउँका झण्डै १५० किसान सुन्तलाखेतीमा लागेका छन् । यतिखेर सिगाना ‘सुन्तला गाउँ’ ले चिनिन थालेको छ । वडाअध्यक्ष राजन केसीका अनुसार सिगानामा झण्डै १ हजार रोपनीमा व्यावसायिक सुन्तलाखेती छ । ‘अहिले फल दिने बोट १२ हजार बढी छन्, बढाएर २५ हजार पु¥याउने लक्ष्य छ’, उनले भने ।
वडास्तरीय कृषि समितिले यो वर्ष रू.२ करोड बराबरको सुन्तला निर्यात हुने आकलन गरेको छ । गत वर्ष रू.८२ लाखको सुन्तला सिगानाबाट बाहिरिएको थियो । फल लाग्ने बेला असिनाले चुटेपछि अघिल्लो वर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको थियो । काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता ठूलठूला शहरबाट आउने व्यावसायीले सिगानाका सुन्तला खरीद गर्छन् । व्यावसायीले किसानबाट बगैंचै ठेक्कामा समेत किन्छन् । ४० बोटमा फलेका सुन्तला रू.७० हजारमा एकमुष्ठ ठेक्कामा बेचेको किसान डिलबहादुर खड्काले बताए । अन्नबालीभन्दा सुन्तलाखेती गर्दा नगद आम्दानी हुन थाले पछि किसान सुन्तलाखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका हुन् । सिगानासँगै बिहुँ, तित्याङ, दमेकलगायतका ठाउँ सुन्तलाखेतीका लागि ‘पकेट’ मानिन्छन् । जिल्लामा करीब ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाखेती हुँदै आएको छ ।